Chii chinonzi ROE? o Dzoka pane Zvako Zviwanikwa | Ehupfumi Zvemari
ROEIri muchiSpanish. Dzokera kuEquity, inogamuchira chirevo cheChirungu, "Dzokerai Kune Zvakaringana ” Iyo inoshanda seimwe yeakakosha maturusi anoshandiswa pakuongorora kwehupfumi hwebatsiro iyo kambani inayo.
2 Ungaverenga sei ROE?
3 Zvishandiso zvakasiyana zveROE
4 ROE kubva pane zvakaratidzwa zvekambani
5 Iyo Dupont fomula
5.1 Heano zvikamu zvishanu zve ROE zvinoenderana neDupont fomula
6 Tinogona kupedzisa nekutaura izvozvo ROE
Iyo ROE paramende ine basa rayo ndeyekunyora iko kuita yakawanikwa nemugovana na rukudzo kumari yauinayo inverant mune yakasarudzika nzanga. Apa ndoreva kuti ROE inoyera iyo zvinogoneka simba iyo kambani iri kubvunzwa ine, ku mubhadharo upfumi kusvika shareholders kuti vanoshanda pamwe mune izvi.
Vashandi vanogona ongorora Nekushandisa iyi paramende, iyo kushanda Del guta iyo yavakashandisa mukudyara uye, nenzira iyi, tarisa la kugona kuchengetedza mari dzako muhukama ihwohwo kana kurega basa chikepe chisati chanyura.
Ungaverenga sei ROE?
Dzoka pa equity kana ROE, Inoenderana yakanangana nepesenti yakawanikwa nekukamura iyo mambure purofiti mushure memitero kesken ari yako mari.
Net purofiti mushure memutero
Iyi fomula inogona zvakare kunzwisiswa se kuyera nezvekuti imwe kambani inodyara sei imwe huwandu hwemari kuti ibudise mari yakakodzera.
El ROE Iyo ine mashandisiro muzvikamu zvakawandisa, makambani ese mahombe anoishandisa uye inoshanda zvakawoma kuona kuti pane mubatsiri wemambure mushure mekuisa mari mune chimwe chirongwa.
Vanogona pesvedzero zvinhu zvakawanda panguva ye kuverenga zvakakwana purofiti iyi, asi zvinhu zvakakura uye zvisingazungunuke zvekuverenga zvakatoratidzwa kwauri, zvishandise semupimo usingakanganisi kuona zviriko uye zviripo ramangwana rekudyara kwako.
Zvishandiso zvakasiyana zveROE
El ROE inogona kuiswa kubva dos maonero akasiyana, ayo e investor, uye iyo ye kambani iwe uchagamuchira izvi zvakafanana.
ROE kubva pamaonero emusimari
El ROE Seyero yemubhadharo, yakave imwe yeanonyanya kushandiswa kune akakodzera uye anoshanda shanduko yemakambani. Kune vagovana zvinonyanya kukosha kuti iyo ROE yakakwira kupfuura kuti kune purofiti yakakura mumhedziso.
Sezvo iyo ROE chiratidzo chakanyanya zvinoshanda, yekuti kambani irimo sei invest ndizvo kutarisira y kugadzira profits neguta rine yakaiswa mazviri, saka, iri paramende yakakosha kwazvo iyo inofanirwa kutariswa pasina kusahadzika, kana iwe uchida kuita investa mukati nepakati uye kwenguva refu, kupa kutevera y kuongororwa kune yako mari.
ROE kubva pane zvakaratidzwa zvekambani
Chikonzero Mukuru umo mamaneja emari e kambani ivo vanoshandisa iyo ROE ndezve ziva Makadii kushandisa all investments yevamwe uye maitiro ekugadzira zviri nani mubhadharo. Uye zvakare, iwo akanaka manhamba mune ino paramende, isa chero kambani mune chinzvimbo dika pamberi paJehovha international market, kubva pakuwanda yakakwira iva iye ROE, yepamusorosoro Ichave iyo profitability iyo kambani inogona kuve nayo, zvinoenderana neyako zviwanikwa zvinoshandiswa mukubhadhara mari.
Ndokureva kuti iyo ROE inoisa iyo kambani mune yerudzi rwepasi rose kuvimba chinzvimbo, umo makambani ane akanyanya indices ROE, tora vatengesi vakuru uye vatengese zvikamu zvavo zviri nani mitengo zuva nezuva, kune rimwe divi kana paramende ikadzikira, iyo chivimbo of the vatengesi, yakafukidzwawo, kuti iyo kambani igovane ideredze mutengo wavo, uye vatengesi vakabhadhara zvakawanda kwavari, vanorasikirwa nemari. Saka zvakakosha kuti uchengetedze iyi indekisi nguva dzose uye uite zvakarongeka uye neyakaomarara-inoshamwaridzika mitemo yebasa.
SWR inoshandiswawo zvakanyanya kuenzanisa iyo profitability Pakati pemakambani ari muchikamu chimwe chete, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kuenzanisa pakati pemakambani ari munzvimbo dzakasiyana kunogona kutungamira kumhedzisiro, nekuti kudzoka kwemari yezvehupfumi kunogara kuchisiyana nenguva uye chimiro zvichienderana nedanho ravari.
Kuita yakakosha ongororo yekambani, iyo ROE paramende isingagone kufuratirwa, kubatsira kwayo kunoisa zvikamu zvakawandisa uye nyanzvi, kukosha kwe ROE Izvo hazvina kupokana pari zvino, kuvapo kwayo kuri pachena, mune rakabudirira ramangwana iro makambani mazhinji azvino ano ave neakakura zvisingaite mumakore mashoma, kesi dzakadai saFacebook, YouTube, Snapchat, pakati pevamwe.
Kana tichiverenga iyo ROE yekambani yakapihwaIzvo isu zvatiri chaizvo kuyera kugona kwenzanga kuunza purofiti kune avo vanogovana navo.
ROE inopa vagovani chishandiso chekuongorora purofiti iyo yavakawana kubva kumari dzavakaisa, saka ivo vanozoongorora nemhedzisiro iyi kana kuri kuchenjera kuenderera nekudyara. Kuti utarise kuti kambani iri kuita mushe, iyo ROE inofanirwa kudarika iyo shoma purofiti iyo seanogovana inodiwa kuisa mari mune rimwe bhizinesi.
Izvo zvinoshandawo kuyera kugona kwebhizimusi nzanga, ndiko kuti, huwandu hwebhenefiti iyo yainopa kubva kune zviwanikwa zvakadyarwa. Semuenzaniso, kambani ine ROE ye30%, saka inowana makumi matatu emaeuro emubatsiro, kune ese zana maeuro akaiswa mari.
Iyo inoshandiswa kuteedzera shanduko yekambani uye, mukuwedzera, inobvumira kuenzanisa uye inoratidza mashandisiro ekambani ari kushandiswa. Iyo yakakwira iyo ROE, ichawedzera zvakananga iyo purofiti iyo inogona kupihwa nekambani, nekudaro, inozove inokwezva kune chero investor.
Iyo Dupont fomula
Donaldson Brown Ndokusaka muna 1912 wakazvibvunza mubvunzo waungave uchizvibvunza iwe panguva ino: Kana iyo ROE yekambani ichiwedzera kubva pa8% kusvika pa12% ... nei zvaitika?, Nekuti ivo vawedzera purofiti ne20% kuchengeta mambure akakosha wenguva dzose?
Ndicho chikonzero nei Donaldson akaronga kuputsa fomula pasi kuita mashanu akasiyana.
Heano zvikamu zvishanu zve ROE zvinoenderana neDupont fomula
[NI / EBT]: Hukama hwakagadzwa pakati peneti mhindu uye purofiti mushure mekuwedzera mutero. Yakabatana neyemari mamiriro.
[EBT / EBIT]: Hukama huri pakati pepundutso kare de mitero uye kubatsirwa kare de kufarira. Inoenderana nehuwandu hwayo iyo kambani ine chikwereti, pamwe nezvibereko zvakabhadharwa nayo.
[EBIT / Sales] Icho chiri pamusoro pekusimbisa hukama kesken all kutengesa and the mhedzisiro de all kushanda. Kugadzira mhindu yemabhizinesi ebhizinesi.
[Sales / Assets] Ndiyo nhamba yenguva dzekutengesa dzakagadzirwa chivharo chakazara zvinhu. Izvo zvinoenderana nezinga rehukama hwehukama hunowanikwa nekambani. Imwe pfungwa yakaoma kunzwisisa, asi kwave kuri kudzoka kwemari, ndiko kuti, zvawakaisa mari zvakawanikwazve mune imwe nguva.
[Assets / Kuenzana]. Iyo inowirirana zvakananga ne nhamba yenguva iko kuenzana kuri mune midziyo. Iyo inoenderana neyakaenzana chikwereti uye kuwedzera kwekambani.
Kuti tijekese zvakare, ngatitarisei muenzaniso wekufungidzira. Ngatiti Juan ane € 200.000. Naayo € 200.000 iye anotenga chivakwa chinoroja pa € ​​20.000 mushure memitero. Juan's ROE ndeye 10%.
Juan anobva afunga kupinda muchikwereti nedzimwe dzimba mbiri kuti adzirore nemutengo mumwe chete. Naizvozvo, iye achange aine chikwereti che400.000 euros, kwaanofanira kubhadhara 5% mubereko. Iyo mambure purofiti ichave 40.0000 [60.000 mari (20.000 euros paimba yekurenda) zvishoma 20.000 euros yemubereko].
Juan's ROE yakabva pa10% kusvika pa20%.
Tsika dzemuenzaniso: Izvo zvakakosha kuti utarise kune chikwereti chekuongorora ROE.
Tinogona kupedzisa nekutaura izvozvo ROE
Iyo inoshanda seyemari chishandiso uye inofananidzwa paramende yevanamuzvinabhizimusi nevashambadziri, vane hupfumi hunoratidzwa zvichienderana nehuwandu hwe ROE kuti izvi, nekuwedzera huwandu uhu, mikana yekambani kumira musika wepasi rose inowedzerawo, sezvo vachizvimisikidza sekambani yakavimbika, uko mari yevarimi kugadzikana uye kuchengeteka, with the njodzi yakaderera.
El menor Njodzi ndiyo inogara ichitsvakwa nevatengesi, saka iyo ROE inotaurira makambani, kwete kushambadzira kana kutengesa, kana zvisiri izvo fungidziro yemakambani mune ramangwana, uko kufungidzira kuri pamberi muhupfumi, kana ukasaedza kufanotaura zvichaitika mumusika, iwe unogara uri nhanho. kudzoka kubva kune vamwe vatyairi uye makambani akagadziridzwa.
Izvo zvakare zvinobatsira zvinoshamisa mukusimudzira mutengo wekambani, kana iyo ROE yekambani inowedzera, iyo zvakare inowedzera zvakaenzana kukosha kwekutengeserana kwezvikamu zvayo.
Hapana mubvunzo kuti imwe yeanoshanda ma paramita kuziva mashandisiro auri kuita zvichibva pane yako mari, pamwe nekuenzanisa mamiriro ekambani imwe neimwe, kana kuburitsa mufananidzo wakanaka uye chivimbo chekukwezva vatengesi, Zvino zvauri ' Wadzidza mashandisirwo eROE, tora mukana wavo kumisikidza iyo bhizinesi rako kana yekudyara kurudyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvematongerwo enyika » Zvematongerwo enyika » Chii chinonzi ROE?